सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्छौं | गृहपृष्ठ
Home सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्छौं
सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्छौं
मानबहादुर जिसी, मेयर, पोखरा महानगरपालिका
लेखनाथ पोखरा नेपालको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो । नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य तथा गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले कार्यभार सम्हालेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । पोखरालाई ‘स्मार्टसिटी’ बनाउने प्रतिबद्धतासहित चुनावमा लडेर विजयी भएका जिसीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । यद्यपि, ऐनकानून बनिसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्साहजनक काम गर्ने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, १ वर्ष अवधिमा महानगरमा भएका काम, आगामी कार्ययोजनालगायत विषयमा जिसीसँग आर्थिक अभियानका पोखरा संवाददाता सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी :
कार्यकाल सम्हालेको १ वर्षभन्दा बढीको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मैले कार्यकाल सम्हालेको १ वर्ष १ महीना १५ भइसकेको छ । यस समयमा नियमित कार्यभन्दा अन्य काम अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । थप काम भनेको ऐन नियमकानून बनाएका छौं । यसबाट काम गर्न धेरै बाटो खुलेको छ । बनेका ऐन तथा नियमले अब काम गर्न सहज हुनेछ भन्ने लागेको छ । तेस्रो नगसभाले राम्रो निर्णय गरेको छ । महानगरलाई कतातिर र कसरी लैजाने भन्ने स्पष्ट गराएको छ । कामअनुसार परिणाम निकालेर अगाडि बढ्दा महानरलाई उत्कृष्ट गन्तव्यमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ । अबको एक मात्र लक्ष्य महानगरलाई उत्कृष्ट बनाउने र रचनात्मक काम गर्ने नै हो, जुन काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै शुरू हुनेछ ।
लक्ष्यअनुसार खासै काम भएका छैनन् नि !
काम केही भएन भन्नेमा म सहमत छैन । रातारात केही परिवर्तन हुँदैन । काम गर्दा धेरै पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक काम भइरहेका छन् । सडक मर्मतसम्भार गरिएको छ । भित्री बाटो पनि स्तरीय बनाइएको छ । कतिपय सडक ढलान भइरहेका छन् । सरसफाइको क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । कामका लागि सेवाग्राहीलाई महानगरको कार्यालयमा आउन नपरोस् भनेर वडा वडामा काम हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । प्रविधिमैत्री सुशासनको व्यवस्थापनको तयारीमा छौं । केही काम भएन भन्नु धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि हो । भएका कामबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका वडालाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने काम थालेका छौं । सेवाग्राहीको सहजताका लागि अनलाइन प्रणाली तथा प्रविधिमैत्री सेवा शुरू गर्ने तयारीमा छौं ।
परिषद्ले अघि सारेका केही योजना महत्त्वाकाङ्क्षी पनि छन् । पूरा होलान् ?
महत्त्वाकाङ्क्षी नहुने हो भने काम गरिँदैन । केन्द्र तथा प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने काम पनि केही छन् । फेवा, बेगनासलगायत तालको संरक्षण, फेवाताल ढल डाइभर्शन, फेवा–बेगनास मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई जमीनमुनि व्यवस्थापन तथा रेलिङ निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, तालचोक–खुदीको मुहानसम्म चारलेन सडक, सात स्थानमा आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण, महानगरपालिका भवन निर्माण, ३० ओटा कनेक्टिङ सिटी सडक, फिर्के कोरिडोर चक्रपथको गुरुयोजना र सीसीटीभी जडान कार्यक्रमलाई महानगरको गौरवको योजनामा हामीले परिषद्बाट उल्लेख गरेका छौं । यी योजनाको १ वर्षसम्म अध्ययन तथा अनुसन्धान भए । मोनो रेलका लागि प्रदेशसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । आम नागरिकलाई सहज तरीकाले यातायातको सुविधा दिन पोखरा र साविकको लेखनाथलाई जोड्न पनि मोनो रेल आवश्यक छ । ल्याण्डफिल साइटलाई हामी आफ्नै स्रोतबाट छिट्टै व्यवस्थापन गर्छौं । यस्ता काम महानगरका लागि अत्यावश्यक भएकाले पूरा गर्न लागिपरेका छौं । हाम्रो महानगरमा पर्यटकीय स्थल धेरै छन् । यो महानगर नेपालकै ठूलो भएकाले अबको ४ वर्षपछि पूर्वाधार पनि त्यसैअनुसार निर्माण गरिनेछ । खानेपानी, सरसफाइ, यातायातलगायतको सुविधा पनि स्तरीय हुनेछ । आममानिसले मूल्याङ्कन तथा महसूस गर्न सक्नेगरी हामी महानगरको विकास अघि बढाउँछौं । महानगर पर्यटनको मुख्य हब हो ।
लेखनाथलाई खासै महङ्खव नदिएको स्थानीयको गुनासो सुनिन्छ नि !
लेखनाथ (पौड्याल) कविशिरोमणि तथा नेपालका गहना हुन् । उनको नामसँग जोडेर विकास कसैले नसाटौं । लेखनाथको प्रतिष्ठा बढाउन के गर्न सकिन्छ, त्यसबारे सोचौं । २० वर्षमा लेखनाथ धेरै अगाडि बढेको छ । यसलाई हामीले विभेद गर्नु आवश्यक छैन । यसमा हामी सचेत छौं । म आफू पनि त्यहीँको स्थानीय हुँ । पोखराका सबै ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार समुचित विकास हुनेछ ।
विभिन्न अधिकार वडामा प्रत्यायोजन भएका छन् । वडा कार्यालयबाट काम गर्ने तथा सेवासुविधा प्रदान गरेका छौं । १०÷१५ लाख रुपैयाँसम्मको सम्झौता तथा फोरफार वडाबाटै हुनेछ । १ हजार स्क्वायर फूटका घरको नक्सा वडाबाटै पास हुन्छ र सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि त्यहीँबाट दिन्छौं । यस्ता कामलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आगामी साउनदेखि कर पनि वडाबाटै चुक्ता गर्छौं । अब यस्ता कामका लागि महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई भेट्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । यति भएमा स्थानीयले सिंहदरबारको अधिकार आफ्नो घरघरमा आएको अनुभूति गर्नेछन् । प्रत्येक वडामा नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्न, शिक्षाको स्तर उकास्न र सुविधासम्पन्न विद्यालय बनाउन पनि हामी लागिरहेका छौं ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच द्वन्द्व बढेको हो ?
द्वन्द्व गर्नु सङ्घीयता फेल गराउनु हो । प्रदेशसँग छलफल गरेर सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्छ । सङ्घले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जोड्ने काम गर्छ । प्रदेशले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोड्ने योजनाका काम गर्छ । यसका आफ्ना आफ्ना वर्गीकृत छन्, जसले जहाँ काम गरे पनि समन्वय हुनुपर्छ । योजना डुब्लिेकेशन हुनुहुँदैन । राम्रो परिणाम निकाल्ने गरेर काम गर्नुपर्छ । सङ्घ तथा प्रदेश भन्नुभन्दा कार्यपालिका नै कार्यक्षेत्र हो । सबैसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर काम गर्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरलाई ५ वर्षमा कसरी अगाडि बढाउने, १० वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाकासहित अघि बढ्छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका वडामा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर मानिसको बाँच्न पाउने तथा औषधिउपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछौं । खानेपानीलाई व्यवस्थित तथा स्वस्थकर बनाउनेछौं । सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्नेछौं । गौरवका योजनाको काम थाल्नेछौं र समयमै सम्पन्न गर्नेछौं ।
सामाजिक सञ्चालनमा छाडा चौपायाको फोटो राखेर ‘स्मार्टसिटी’ भनेर व्यङ्ग्य गरिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
स्मार्टसिटी भनेको पूर्वाधार स्तरीय तथा सुविधासम्पन्न हुनु हो । खानेपानी, बिजुली, हरियाली वातावरण, सरसफाइ स्मार्टसिटीका मुख्य अङ्ग हुन् । यहाँ स्मार्ट शब्दलाई गलत तरीकाले व्याख्या गरिएको छ । छाडा चौपाया पोखरामा समस्याको रूपमा थियो । अहिले धेरै छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गरेका छौं । व्यवस्थापन गर्दागर्दैै पनि केही अझै देखिएका छन् । हामी व्यवस्थापनमा निरन्तर लागिरहेका छौं । पोखरालाई राम्रो बनाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुलाई मैले व्यङ्ग्यभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउने सुझावका रूपमा लिएको छु । हामी शहरका विभिन्न समाधान गर्दै अघि बढिरहेका छौं । पोखरा पर्यटकीय नगर भएकाले यसको गरिमा बचाइराख्नु आवश्यक छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट लाग्नेछौं ।